Dowladda Maraykanka oo Lacag $575-Milyan Siinaysa Wadamo ay Somaaliya Kujirto – Radio Daljir
Dowladda Maraykanka oo Lacag $575-Milyan Siinaysa Wadamo ay Somaaliya Kujirto
Seteembar 22, 2017 10:21 b 0
Wakaaladda Maraykanka ee Horumarinta Caalamiga USAID ayaa ku dhawaaqday $ 575 Milyan oo dheeraad ah oo gargaar ah in ay siineyso dalalka Yemen, Koonfurta Suudaan, Nigeria iyo Soomaaliya oo Abaaro ay ka jiraan.
Waxay sheegtay Khamiistii ujeedada lacagtan ay u bixineyso in ay tahay sidii ay u caawin laheyd malaayiin qof oo Afartan wadan ku wajahaya gaajada iyo rabshadaha.
“Lacagta dheeraadka ah waxay keenaysaa kaalmada bini’aadanimo ee Mareykanka ilaa $ 2.5 bilyan oo ah afartan dal ee tan iyo bilawgii sanadka 2017.” Ayaa lagu yiri warka Hay’adda Mareykanka ee Horumarinta Caalamiga ah.
Mark Green, Madaxa USAID, ayaa Maaliyaddan cusub kaga dhawaaqay shirka Golaha Guud ee Qaramada Midoobay New York, halkaas oo hoggaamiyeyaasha caalamku ay ka maqlaan dhibaatada aan caadiga ahayn ee ka jira dalalkan.
Maanhadal: Ismaandhaafka Siyaasadeed ee DFS iyo Dowlad Goboleeldyada iyo Siyaasadda Sacuudiga & Imaaraadka (dhegayso)